R&D - Nanjing Reborn Qalabka Cusub Co., Ltd.
Cusbooneysiinta iyo awoodda R & D ee shirkadaha
Awoodda cusub ee R & D ee ganacsiyada ayaa aasaas u ah xaqiijinta horumar waara iyo ilo muhiim ah oo ka mid ah tartanka asaasiga ah ee shirkadaha. Nidaam maareyn wanaagsan oo R & D ah ayaa kaalin xoog leh ku leh kaalmaynta hawlgalka xawaaraha sare leh iyo helitaanka joogtada ah ee tartanka shirkadaha.
Iyada oo ay sii kordheyso jawiga bulshada ee tartanka, cilmi baarista iyo soosaarka tikniyoolajiyadda iyo horumarka ayaa noqotay goobta ugu weyn ee lagu dagaallamo shirkadaha. Si kastaba ha noqotee, maaraynta mashruuca R & D waa shaqo dhammaystiran oo leh caqabado waaweyn. Sida loo daboolo baahida macaamiisha iyo suuqyada, iskuduwaha waaxyaha iyo ilaha, loo sameeyo hanaan abaabul, iyo isku dubaridka kooxaha si hufan kor loogu qaado cilmibaarista iyo horumarinta mashruuca iyadoo la raacayo hab cilmi baaris iyo nidaamsan iyo geeddi-socodka horumarinta ayaa noqotay arrin muhiim ah oo ay tahay in shirkadaha casriga ahi wajahaan.
REBORN waxay ku adkaysanaysaa "Maamulka wanaagsan ee iimaanka, Tayada marka hore, macaamilku waa tan ugu sarraysa" iyada oo ah siyaasadda aasaasiga ah, xoojinta is-dhiska. Waxaan R&D alaabta cusub by iskaashi la University, ilaalinta horumarinta tayada wax soo saarka iyo adeegga.
Mustaqbalka, waxaan nafteena u hureynaa cilmi baarista iyo horumarinta waxyaabo cusub oo balaastik ah oo deegaanka u fiican, fuliya hal-abuurnimo cagaaran, isla mar ahaantaana hagaajisa waxqabadka ballaaran ee alaabada polymer-ka. U hogaansanaanta cilmiga, caqliga iyo horumarka waara.
Iyada oo la cusbooneysiinayo isla markaana la waafajinayo warshadaha wax soo saarka gudaha, shirkadeena waxay sidoo kale bixisaa adeegyo la-talin dhameystiran oo loogu talagalay horumarinta dibedda iyo isku biiritaanka iyo soo iibsiga shirkadaha tayo sare leh ee gudaha. Isla mar ahaantaana, waxaan soo dhoofsannaa waxyaabo kiimiko ah iyo walxo cayriin ah oo dibedda ah ayaa daboolaya baahiyaha suuqa gudaha.
Nanjing Reborn Qalabka Cusub Co., Ltd.